कोरोना भन्दा खतरनाक भाइरस कुखु`राबाट फैलिने, आधा `विश्व खत रामा पर्ने वैज्ञानिकको भविष्य वाणी !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Lifestyle/ Health/कोरोना भन्दा खतरनाक भाइरस कुखु`राबाट फैलिने, आधा `विश्व खत रामा पर्ने वैज्ञानिकको भविष्य वाणी !!
काठमाडौं। कोरोना भाइ`रसको म`हामा`री वाट मुलु`कले पार नपाउँदै बैज्ञानिकले फेरी अर्को महा`मा`रीको चेतावनी दिएका छन् । अमेरिकाका चर्चित वैज्ञा`निकले खानपानमा सन्तुलन नराखे अब फेरी कोरोना भन्दा ठूलो महा“रीको सामना वि`श्वले गर्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले अबको महामारी कुखुरावाट फैलने चेतावनी दिएका हुन् । वैज्ञानिक माइकल ग्रेगरले विश्वलाई चेतावनी दिँदै भनेका छन् कुखुरा फार्मवाट सुरु हुने भाइरस कोरोना भन्दा खतरा हुनेछ र त्यसले विश्वका आधा जनसंख्यालाई प्रभावित बनाउने छ ।
वैज्ञानिक मायकल ग्रेगरले आफ्नो नयाँ किताब ‘महामारीको क्रममा कसरी बच्ने’ (हाउ टु सर्भाइभ अ प्यान्डेमिक) भन्ने वुकमा यो कुरा उल्लेख गरेका छन् । कुखुरावाट फैलने महामारीको आधारका बारेमा भने उनले केही खुलाएका छैनन् । उनले कुखु`राको कारण अब महा`मा`रीले मानव जिवन संकटमा पर्ने चेतावनी दिएका हुन् । ठूलो मात्रामा कुखुरापालन बढ्दै जाँदा खतरा बढेको छ उनको भनाई छ । ग्रेगरका अनुसार कुखुरा फार्मबाट निस्किने भाइरस यतिसम्म खतरनाक हुनेछ कि आधा विश्व खतरामा पर्नेछ ।
उनले आफ्नो त्यो भविष्य`वाणी पु`ष्टि गर्ने आधार भने प्रस्तुत गरेका छैनन् । उनको सो दावी प्रति अन्य वैज्ञानिकले पनि कुनै प्रतिकृया दिएका छैनन् । तर, माइकल ग्रेगरले भनेका छन् कि मानिसको अन्य जीवसँग नजि`कको सम्बन्धले नै उसका लागि खतरा उत्पन्न गरिरहेको छ । अहिले फैलिएको कोरोना चमेरोवाट फैलिएको आशंका गरिएको बेलामा कुखुरा पनि मानव जिवनको लागि खतरा हुने उनको चेतावनी हो । चीनको वुहानस्थित जंगली जनावरको बजारबाट यो फैलिएको विश्वास गरिएको छ ।
डेलीमेलको रिपोर्ट अनुसार अमेरिकी वैज्ञानिक मा`इकल ग्रेगरको दावी छ कि कुखुरा फार्म`बाट फैलिने भाइरस बाट उत्पन्न हुने खतरा कोरोना भाइरसभ न्दा कैयौं ठूलो हुनेछ र यसबाट विश्वको आधा जनसं`ख्या समा`प्त हुन सक्छ । उनको यो भनाई र दावीका विष`यमा अन्य वैज्ञानि`कको धारणा के आउँछ त्यो हेर्न बाँकी नै छ । अहिले सम्म अन्य वैज्ञानिले उनको यो दावी पुष्टि गरेका छैनन् ।